Testamenta Taloha - Wikipedia
Atao hoe Testamenta taloha ny fitambaran'ny boky ao amin'ny Baiboly voasoratra talohan'i Jesoa Kristy. Ny Kristiana dia mampiasa an'io teny io hanondroany ny tapany voalohany amin'ny Baiboly, izay voasoratra talohan'i Jesoa Kristy sady antsoin'ny Jiosy hoe Tanakh. Ny Vavolombelon'i Jehovah dia miantso ny Testamenta Taloha hoe "Soratra Hebreo sy Aramianina".
Ny famoronana ny mazava - Gustave Doré
2 Boky ao amin'ny Testamenta Taloha
2.1 Ny Pentateoka
2.2 Ny boky ara-tantara
2.3 Ny bokim-pahendrena
2.4 Ny bokin'ny mpaminany
2.4.1 Mpaminany lehibe
2.4.2 Mpaminany madinika
Ny andian-teny hoe Testamenta Taloha dia fanagasiana ny teny latina hoe Vetus Testamentum. Io andian-teny io indray dia fandikàna ny teny grika hoe Παλαιὰ Διαθήκη / Palaià Diathêkê. Ny hoe palaià (grika) sy ny hoe vetus (latina) dia samy azo adika hoe "antitra", "taloha" na "tranainy" ary ny hoe testamentum (latina) na diathêkê (grika) dia midika hoe "fanekena", "fifanarahana", "fanekem-pihavanana". Ny Testamenta Taloha izany dia ny Baibolin'ny Jiosy na Jody, izay antsoina hoe Tanakh.
Ho an'ny Kristiana, ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao no mitambatra ho Baiboly.
Misokajy efatra ny boky ao anatin'ny Testamenta Taloha, dia ny Pentateoka (atao hoe koa Boky dimin'i Mosesy), ny bokin-tantara (na boky ara-tantara), ny bokim-pahendrena (na bokin'ny Olon-kendry), ary ny bokin'ireo Mpaminany. Manampy azy ireo ireo boky sokajina hoe Deoterôkanônika izay tsy tafiditra ao amin'ny Tanakh sy ao amin'ny Baiboly prôtestanta. Marihina fa telo fotsiny ny fizaràna ny Baiboly hebreo fa tsy efatra.
Ireo boky ao amin'ny atao hoe Pentateoka (avy amin'ny teny grika pente: "dimy" sy teukhos: "horonana") na Boky dimin'i Mosesy (na Boky dimin'i Môizy ), izay antsoin'ny Jiosy koa hoe Lalàna, Lalàn'i Mosesy, na Torah, dia ny Genesisy (na Jenezy), ny Eksôdosy (na Eksaody), ny Levitikosy, (na Levitika), ny Nomery (na Fanisana), ary ny Deoterônômia (na Deoterônômy).
Ny bokin-tantara na boky ara-tantara dia ny Jôsoa (na Jôsoe), ny Mpitsara, ny Rota, ny Samoela voalohany, ny Samoela faharoa, ny Mpanjaka voalohany, ny Mpanjaka faharoa, ny Tantara voalohany, ny Tantara faharoa, ny Ezra (na Esdrasa) ny Nehemia ary ny Estera. Ny Baiboly katolika dia ahitana boky fanampiny: ny Tôbià, ny Jodita ary ny Makabeo voalohany sy faharoa izay atao hoe deoterôkanônika (izany hoe "boky kanônika faharoa") nefa ataon'ny Prôtestanta hoe apôkrifa ("miafina").
Ny bokim-pahendrena na bokim-pahamasinana, atao hoe koa Hagiografa, dia ny Joba (na Jôba), ny Salamo, ny Ohabolana, ny Mpitoriteny (na Kôhelety), ary Tononkiran'i Solomona (Tononkira dia Tononkira na Tononkira Fanaperana). Ny Baiboly Katolika dia mbola ahitana ny Fahendren'i Salômôna (na Fahendrena) sy ny Ekleziastika (na Siràka) izay boky deoterôkanônika na apôkrifa.
Ny bokin'ny mpaminany dia misy sokajy roa, dia ireo bokin'ny mpaminany lehibe sy ny bokin'ny mpaminany madinika.
Efatra ny mpaminany lehibe, dia ny Isaia (na Izaia), ny Jeremia, ny Ezekiela, ny Daniela, manampy azy ireo ny Bokin'ny Fitomaniana. Atao hoe "mpaminany lehibe" izy noho izy nanoratra lava miohatra amin'ny sasany izay atao hoe "mpaminany madinika". Ny Baiboly katolika dia ahitana koa ny Baroka izay boky deoterôkanônika na apokrifa.
Roa ambin'ny folo ny mpaminany madinika, dia : ny Hosea (na Ôsea), ny Joela (na Jôela), ny Amosa (na Amosy na Amôsa), ny Obadia (na Abdiasa), ny Jona (na Jônasa), ny Mika (na Mikea), ny Nahoma, ny Habakoka (na Habakòka), ny Zefania (na Sôfônia na Tsefania), ny Hagay (na Akjea), ny Zakaria ary ny Malakia (na Malaký). Atao hoe "mpaminany kely" izy ireo noho izy nanoratra kely.
Ireo boky fanampiny ao amin'ny Baiboly katolika no ataon'ny Katolika hoe deoterôkanônika ("kanôna faharoa") na ataon'ny Protestanta hoe apokrifa ("miafina"). Ireo boky ireo dia tsy hita ao amin'ny Baiboly hebreo (Tanakh) sy ny Baiboly Protestanta. Manampy azy ireo ny toko fanampiny amin'ny Estera sy ny Daniela.
Pentateoka - Boky ara-tantara - Bokin'ny mpaminany - Bokim-pahendrena
Rahamaky ny Testamenta Taloha amin'ny teny hebreo: tsindrio eto: http://www.tanach.us/Tanach.xml#Home
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Testamenta_Taloha&oldid=1041721"
Dernière modification le 18 Desambra 2021, à 17:58
Voaova farany tamin'ny 18 Desambra 2021 amin'ny 17:58 ity pejy ity.